Kutheni abakhenkethi abanoxanduva kufuneka betyelele iHonduras, i-El Salvador, iRiphabhlikhi yaseDominican neGuatemala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseHonduras » Kutheni abakhenkethi abanoxanduva kufuneka betyelele iHonduras, i-El Salvador, iRiphabhlikhi yaseDominican neGuatemala
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • Iindaba eziPhukileyo zaseGuatemala • Iindaba zaseHonduras • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abakhenkethi abanenkathalo kufuneka bajonge ukuya nokuxhasa iHonduras, i-El Salvador, iRiphabhlikhi yaseDominican neGuatemala ngokhenketho. Abakhenkethi abanenkathalo kufuneka bajonge ngononophelo xa bexhasa amanye amazwe aseCaribbean naseLatin American. Lo myalezo ufike ngexesha ngokuqala kweWTTC (iNdibano yeHlabathi yoKhenketho noKhenketho) malunga nokuqala eBuenos Aires, eArgentina.
Ngaphandle kweHonduras, i-El Salvador, iRiphabhlikhi yaseDominican kunye neGuatemala, amanye amazwe aseLatin America naseCaribbean asokolisa ukwenza inkqubela phambili ekutshatweni komtshato wabantwana xa kuthelekiswa namazwe akuMzantsi Asia, ngokwengxelo yeUNICEF.
Ngelixa ezinye iindawo zehlabathi ziye zanciphisa izehlo zokutshata kwabantwana, “oku bekungenzekanga kwingingqi yethu, apho ibhinqa elinye kwamane litshatayo phambi kweminyaka eli-18 ubudala,” itsho njalo ingqonyela ye-UNICEF uMaria Cristina Perceval.
ILatin America kunye neCaribbean ibingumbandela kuphela kwihlabathi apho imitshato yabantwana ingakhange yehle kakhulu kule minyaka ilishumi idlulileyo, ngokwengxelo yakutshanje ye Iarhente yabantwana yeUN (UNICEF).
KwisiXeko sasePanama uMaria Cristina Perceval, inkosi ye-Unicef ​​yeLatin America nakwiCaribbean, satsho sathi: “Sibona inkqubela yokwenene kwamanye amazwe ukukhusela amantombazana ekutshatweni kwabantwana. "Nangona kunjalo, khange kwenzeke njalo kwingingqi yethu, apho omnye kwabafazi atshatayo phambi kweminyaka eli-18 ubudala."
Ngenxa yoko, la mantombazana akazuzi kumathuba afanayo obomi kwixesha eliphakathi nelide, ngomngcipheko ophezulu woku ubundlobongela obuphathelele kwezesondo, ukukhulelwa kwangethuba, ukuyeka isikolo, ukongeza kukhutshelwa ngaphandle koontanga babo, yongeze uPerceval.
Ngamazwe amane kuphela kulo mmandla awuvalileyo umtshato wabantwana, nge IHonduras, i-El Salvador, iRiphabhlikhi yaseDominican neGuatemala.
NgoFebruwari, enye ingxelo ye-Unicef ​​yalumkisa ngelithi akukho nkqubela-phambili yaneleyo ekunciphiseni phezulu ukukhulelwa kolutsha amazinga eLatin America naseCaribbean: nangona amazinga okukhulelwa kolutsha efikisayo “ehle kancinci” kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo, lo mmandla unelona zinga liphezulu kwihlabathi jikelele.
Inani elipheleleyo lamantombazana atshatileyo ebuntwaneni limile 12 yezigidi ngonyaka kwaye ngaphandle kwemigaqo-nkqubo yoluntu ukujongana ngokufanelekileyo nomcimbi, ngaphezulu I-150 yezigidi zamantombazana ongezelelweyo aya kutshata ngaphambi kokuzalwa kwawo kwe-18 ngo-2030, uyifumene ingxelo.
Kumhlaba jikelele, malunga nelinye kumantombazana amathandathu afikisayo (aneminyaka eli-15 ukuya kweli-19) atshatile okwangoku okanye kumanyano. INtshona neMbindi Afrika inelona nani liphezulu labasafikisayo abatshatileyo (iipesenti ezingama-27), ilandelwa yiMpuma kunye noMazantsi eAfrika (iipesenti ezingama-20) kunye noMbindi Mpuma noMntla Afrika (iipesenti ezili-13). ILatin America ikwindawo yesine nge-11 leepesenti yamantombazana afikisayo.
Ngokwe-UNICEF, imitshato yabantwana kunye neemanyano zokuqala kulo mmandla zinxulunyaniswa nenqanaba eliphezulu lokukhulelwa kolutsha, okwesibini emhlabeni, kunye nomngcipheko wobundlobongela obuphathelele kwezesondo, ukongeza ukungalingani ngokwesini.
Izinto ezijoyina ezinye ezininzi ezinjengentlupheko, izithethe zentlalo, iindima zesini kunye nobudlelwane, iinkolelo kunye nezikhewu kumthetho wesizwe.
Kummandla, ukulingana kwamantombazana kuncitshiswa yimpembelelo yokuba ngumama kwasekuqaleni, ubundlobongela kunye namathuba obomi ancitshisiweyo. Asinakuhlala siwavalile amehlo ethu kwilahleko enokubakho kunye namalungelo alibalekileyo ', yiyo loo nto umnxeba ongxamisekileyo wokuphelisa le mikhwa utshilo ukuqonda.